UMgqibelo Inspiration | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 3, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Umfana wami, Bill, uhola ukukhiqizwa komsindo ngokusebenza kwesikole sakhe samabanga aphakeme iThe Wizard of Oz. Indodakazi yami nayo izobe ikuyo, idlala enye yama-munchkins. UKatie usevele uthola ukubuyekeza okuluhlaza ngabantu abasemdlalweni… upholile impela ngoba useMiddle School kuphela! Kwakungelula kuye ukuthi aze akwazi ukungena emdlalweni. Uyayithanda impela, noma kunjalo. Ngihlala ngimangazwa yithalente lezingane zami zombili.
Njengoba ungacabanga, izinsuku zami nobusuku bami sezigcwele izingoma ezivela kuWizard of Oz. Indodana yami ibhale kabusha "Ukube benginenhliziyo kuphela" enguqulweni yesimanje yezwi. Akazange akwenze ngaphandle kwekhaya, noma kunjalo. Bengifuna ukumkhuthaza kancane ukuthi avele athathe isiginci asidlale ngesikhathi sekhefu lapho sizijwayeza khona namhlanje.
Lapho ngibona le vidiyo ku-3R.e.Medium, ngambonisa yona futhi yamkhuthaza ukuthi alethe isigingci sakhe ekuziqeqesheni namuhla. Indodana yami ayinankinga yokujabulisa isixuku… kodwa hhayi isixuku esingazi nhlobo ukuthi yini ezayo. Cabanga udlala esitimeleni saseParis! Yilokho okwenziwe yilaba bantu abanekhono elimangalisayo:
Mhlawumbe lokhu kuzokukhuthaza! Kukhuthaze indodana yami!
PS: Izolo ebusuku benginakho Bill Ukuqasha I-Wiz ngakho-ke singathola ushintsho lwejubane. 😉
Izingqondo Ezicijile: Ukubhloga ku-Corporate America
Mar 3, 2007 ku-1: 26 PM
Anginathalente lomculo kodwa bengilokhu ngifuna ukungena endaweni ngikhiphe umama, ngicime uQuincy Jones, ujamu opholile ukubheka lokhu, cabanga nje uDoug, lokhu kungaba nguwe, mina noChris EL eChicago, ake uzame. umqondo ongcono, wena noChris niyizame futhi ngizobamba i-viedo cam! umsebenzi omuhle
Mar 4, 2007 ku-10: 56 AM
Nginawe kulowo, JD! Ngiyakwazi ukuphatha inothi futhi ngangikwazi ukudansa cishe ngama-100 lbs edlule. Ngihlala ngitshela indodana yami lapho icebile futhi idumile ukuthi ngizocula okungenani ingoma eyodwa nayo esiteji.
Ngicabanga ukuthi ukhathazekile. 🙂
Mar 3, 2007 ku-4: 56 PM
INonpoint inenguqulo enkulu yedwala ye-Feel it (emoyeni kusihlwa) nayo.
Mar 4, 2007 ku-7: 20 PM
Uxolo, bekuyithrekhi Efihliwe ekukhululweni yi-Mushroomhead
Mar 4, 2007 ku-7: 28 PM
Yikuphi i-albhamu leyo? Indodana yami ibithanda uMushroomhead. Ngingumuntu othanda iSlipKnot uqobo lwami… ikakhulukazi kuthrafikhi futhi ngithanda ukukhipha ulaka lwami. Noma lokho noma i-Notorious BIG (ngilalela konke!).
Mar 3, 2007 ku-9: 49 PM
Sawubona – Ngilithandile iqembu. Siyabonga ngokwabelana ngakho. Konke okunye kusadlula ikhanda lami! (ps. Ngidinga ukutshela uMike ukuthi athole izinto eziningi kusayithi lakhe!)